कति तरल राजनीति ? - Online Majdoor
कति तरल राजनीति ?
भैरव रिसाल १६ असार २०७७, मंगलवार १२:४२
‘होली वाइन’ प्रकरणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एउटा पृथक परिचय दिएको थियो दुनियाँलाई । अब फेरि ‘कोरोना भाइरस’ कार्ड, जन्तर वा बुटी नाम दिए पनि निष्पट्ट अन्धविश्वासको प्रतीक भने पक्कै हो । हाम्रा कम्युनिस्ट शीर्ष नेताहरूले उफ्री उफ्री प्रयोग गरेर फेरि अर्कोपल्ट दुनियाँ हँसाए । साँच्चै यो–यस्ता चर्तिकला हेर्दा अनेक कल्पना आउँछ । कहाँको विज्ञानमा आधारित माक्र्सवाद, कहाँको विज्ञान र ज्ञानमा आधारित भौतिकवाद, कहाँको श्रमको सर्वोच्च मान्यता, कहाँको शोषणको कडा विरोध, कहाँको न्यायपूर्ण वितरण, कहाँको समान कामको लागि समान ज्याला, कहाँको समतामूलक समाजको स्थापना, कहाँ कोरोना भाइरसविरूद्धको तथाकथित कार्ड वा बुटी वा जन्तर । एकजना सांसद सदस्यको छोराले कताबाट ल्याएछन् केही सय थान कार्ड र आफ्नी आमालाई त्यो कार्ड घाँटीमा झुण्ड्याएर संसद् बैठकमा पठाएछन् । मान्छे कसरी बढी बाँचिन्छ, कसरी निरोगी होइन्छ, के–कसरी कोरोनाबाट बचिन्छ ? भनी अनेक खोजी गरिरहेका बेला एउटी सांसद्को घाँटीमा एउटा नौलो प्रकारको वस्तु झुण्डिएको देखेपछि अन्य सांसद्का निम्ति चासो हुनु स्वाभाविक नै भयो । सोधखोज हुने नै भयो । फेरि हाम्रो नेपाली समाज बढी छिद्रान्वेषी समाज नै भयो । छोरोले चीनबाट ल्याएको कार्ड घाँटीमा झुण्ड्याएपछि कोरोनाका भाइरस परैबाट भाग्छन् रे भनी छोराले दिएको भनेछन् । एउटाको सातसय रूपैयाँ पर्छ भनेछन् ।
नभन्दै नेपालको पुरानो खाता पल्टाउने हो भने राजा त्रिभुवन २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सपरिवार दिल्ली जानु महाभूल थियो । त्यो बेलादेखि नेपालको राजनीतिको मूल साँचो दिल्ली हुन्छ भन्ने भान प¥यो । व्यवहारमा के भो भने नेपाली मन्त्रिमण्डलमा झगडा भयो । त्यो झगडा मिलाउन मन्त्रीहरू दुवै पक्ष वा तीनै पक्षका दिल्ली जान थाल्यो । दिल्लीलाई एकप्रकारले बानी नै प¥यो । पञ्चायत शासन आएपछि पनि यो बेठीक बानी पूरै छुटेन । राजा र नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूबीच दिल्ली गुहार्ने बानीजस्तै भयो । हुँदा–हुँदा नेपालमा सशस्त्र जनयुद्ध हुँदा पनि त्यस युद्धका शिखर नेतृत्वलाई दिल्लीको स्तरीय होटेलमा राखियो । राख्नेले राखे, बस्नेहरू बसे । वास्तवमा राख्न पनि नहुने, बस्नेले बस्न पनि नहुने । तर, राखे, बसे । यतिसम्म हुन नहुने काम र कुरा भयो, माओवादी पार्टी र सात दलबीचको १२ बुँदे सहमति पनि दिल्लीमै भयो । तयारी पनि उनीहरूले नै गरे रे ¤ अहिले भारत नेपालसँग त्यही उधारो उठाउँदै आएको छ । यो पृष्ठभूमिमा गएको आइतबार बालुवाटारमा मदन भण्डारीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले रूञ्चेहाँसो जस्तै गर्दै धेरैलाई धेरै भन्नुभयो । परिस्थिति साँच्चै के हो स्वाभाविक छैन । लौन कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी नै हुनुप¥यो । नत्र सच्याउनु प¥यो, कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु भएन ।